တစ်ခုကနိုင်ငံတကာဘဏ်အကောင့်ကိုသင်တစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းထားတဲ့အတွက်တဦးတည်းထက်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်ဘဏ်အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခု ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်, လေ့ထိုကဲ့သို့သောကာရစ်ဘီယံကျွန်းစုများ, ဆိုက်ပရပ်စ်, လူဇင်ဘတ်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်တစ်ဦးအဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးဟေဗန်ဖွင့်လှစ်အကောင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဝေါဟာရ ကမ်းလွန် ဂရိတ်ဗြိတိန်အတွက်ဝေါဟာရနှင့်မူလကရှိတည်ရှိသောကြသည်မဟုတ်ခဲ့ဘဏ်များတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ Merriam-Webster ရဲ့အဘိဓါန်အဆိုအရကမ်းလွန် "အခြေအနေသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အတွင်းလည်ပတ်" ကိုဆိုလိုတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြို့တော်အဖြစ်တာ 50 အဖြစ်ရာခိုင်နှုန်းကကမ်းလွန်ဘဏ်များမှတစ်ဆင့်စီးဆင်း။ ဤရွေ့ကားဘဏ်လုပ်ငန်းတရားစီရင်မှုသိသိသာသာ privacy ကို, ပိုမိုအားကောင်းအကာအကွယ်ဥပဒေပြဌာန်းနှင့်သင့်သိုက်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မှုကိုဆက်ကပ်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာလူတွေကမကြာခဏတရားစွဲမှုထံမှပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုပါ။
နိုင်ငံတကာဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ပါကသင့်ရဲ့ပြည်တွင်းအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်ထက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်မဟုတ်။ သင်ရုံအနည်းငယ်ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်မှတ်ပုံတင်, တစ်ဦးကိုကိုးကားသို့မဟုတ်နှစ်ဦးနှင့်သင့်အဖွင့်သိုက်သည်။ ပြည်ပမှာဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်သည့်အခါဘဏ်များမှယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ် notarized မိတ္တူလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျအနညျးငယျကိုအခြားပစ္စည်းများအကြားထိုကဲ့သို့သော utility ကိုဥပဒေကြမ်းအဖြစ်နေထိုင်ရာတစ်အထောက်အထား, လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပေးဖို့လိုအပ်အဆိုပါပစ္စည်းများကိုအဆိုပါအဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများပေါ်မူတည်သည်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်သင့်ရဲ့လက်ရှိဘဏ်ထံမှရည်ညွှန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုတောင်းခံလိမ့်မည်။ သငျသညျပြီးသားအခြားဘဏ်မှာဘဏ်အကောင့်ရှိပါကနိုင်ငံတကာဘဏ်တစ်ဦးစွန့်စားမှုနည်းသကဲ့သို့သင်တို့မြင်သည်။ ဒါဟာလိုအပ်ချက်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်လက်ရှိအသုံးပြုဘဏ်ထံမှတစ်ဦးကိုကိုးကားစာတစ်စောင်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကျေနပ်နေသည်။
အချို့သောအခြေအနေများတွင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်သို့သွားရန်ပုံငွေ၏အရင်းအမြစ်ကိုအတည်ပြုရန်ချင်ပေမည်။ သူတို့ကသငျသညျ employ ဖို့မျှော်လင့်ထားအရောင်းအအမျိုးအစားကိုကြည့်ယူနိုငျသညျ။ ဒါကဘဏ်ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကမ်းလွန်ဘဏ်များသူတို့တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြဘူးသေချာစေရန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖိအားအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူတို့ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆုံးရှုံးမှုထိတွေ့မှုအန္တာရာယ်။
သငျသညျအလုပျခနျ့နေတယ်ဆိုရင်, တစ်ဦးလစာဆောင်းပါးတိုရန်ပုံငွေစိစစ်အတည်ပြုဘို့ကျေနပ်သက်သေပြသင့်တယ်။ အိမ်ခြံမြေသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရောင်းအထဲကနေပိုက်ဆံစာချုပ်များ, ပိတ်ပွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တူသောမှတဆင့်မူရင်းအထောက်အထားလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးအာမခံစာချုပ်ထံမှရန်ပုံငွေများ depositing သည့်အခါတစ်ဦးအာမခံကုမ္ပဏီအနေဖြင့်တစ်ဦးကစာတစ်စောင်လောက်သငျ့သညျ။ ငွေကိုအမွေဆက်ခံလျှင်, အိမ်ခြံမြေများ၏ executor သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုဘဏ်ကမှစာတစ်စောင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကမ်းလွန်ဘဏ်သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ငွေနှင့်အဘယ်မှာရှိသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကျင်းပကြသည်အကြောင်းကိုမေးလျှောက်လိမ့်မည်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီသင့်အကောင့်တည်ထောင်ရန်ရှိခြင်း၏အားသာချက်ကျနော်တို့အရည်အချင်းပြည့်မီ introducers ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ပြည်ပမှာသွားလာမလိုဘဲအများအပြားတရားစီရင်မှု၌သင်တို့အဘို့အသင့်အကောင့်ကိုမြဲမြံစေနိုင်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းသိကောင်းစရာများ & ကောင်းကျိုးများ
သငျသညျနိုင်ငံတကာကဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာသောအခါသင်သည်နိုင်ငံခြားတရားစီရင်မှု၏အမျိုးမျိုးသောအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အားသာချက်ကိုယူပြီးနေကြသည်။ အချို့နိုင်ငံများရှိ ကမ်းလွန်ဘဏ် privacy ကိုဒါအလေးအနက်ထားသည်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပါတီများမှသတင်းအချက်အလက်ပေးဘဏ်န်ထမ်းများအတွက်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဘဏ်အကောင့်ကိုကြီးစွာသော privacy ကို tool ကိုဖွစျနိုငျပါတယျ။ သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်, သင်ထားတဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ၏နာမ၌ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီး။
သင်တိုင်းပြည်အပေါ်မူတည်ပျော်မွေ့အဆိုပါအခွန်အကြိုးခံစားခှငျ့။ အမေရိကန်ကလူ, ဥပမာဖြစ်ကြ၏ အခွန်ကောက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေပေါ်မှာ။ ဗြိတိန်, ကနေဒါနှင့်သြစတြေးလျမသက်ဆိုင်အကောင့်၏တည်နေရာ၎င်း၏နေထိုင်သူများအခွန်။ ဒါကြောင့်ဥပဒေများအတိုင်းလိုက်နာနှင့်အခွန်နှင့်ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုရယူရန်အရေးကြီးပါသည်။
လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များသောအားဖြင့်နိမ့်များမှာသောကြောင့်, ကမ်းလွန်ဘဏ်များကိုမကြာခဏပြည်တွင်းဘဏ်များထက်ပိုမိုမြင့်မားအတိုးနှုန်းပေးပါ။ သင်တစ်ဦးမတည်မငြိမ်ငွေကြေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူနေတဲ့တိုင်းပြည်အတွင်းအသက်ရှင်လျှင်ကမ်းလွန်ဘဏ်များလုံခြုံရေးပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့သည်ဆိုပါက, ကမ်းလွန်သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေ depositing သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒေသခံတစ်ဦးတရားသူကြီးကသင့်ရဲ့ဘဏ်စာရင်းအေးခဲနေသောစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါသလား ဒါကပုံမှန်အားဖြင့်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံတစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်ထဲမှာကျင်းပသောအခါလုပ်ဖို့အလွန်ခဲယဉ်းသည်။
လူအတော်များများဟာနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများရှိသည်။ ကမ်းလွန်အကောင့်လည်းသူတို့ကိုသင်ဖို့ရန်ပုံငွေပို့ချင်လျှင်ပိုက်ဆံကိုင်ဖို့ကောင်းသောနေရာများဖြစ်ကြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်နေထိုင်သောကိုခစျြတစျခုသငျသညျအမွေထားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ပါလျှင်, ထိုတိုင်းပြည်တွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဝင်ရောက်ဖို့အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရေခြားမြေခြားအခြို့သောနေရာများမှအလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ခရီးသွားလာပါသလား သင့်အနေဖြင့်ခရီးစဉ်အပေါ်သင်နှင့်အတူပိုက်ဆံပမာဏသယ်ဆောင်ရန်ရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လိုပေမည်။ ကဲ့သို့သော, သင်မယ့်အစားနိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်အတွက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့် / သို့မဟုတ်ကိုးစားခြင်းဖြင့်ကျင်းပအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အများဆုံးဆက်ကပ်။ သင့်ဒေသခံတရားရုံးများဟုပြောသည့်အခါ "ငွေကိုကျော်လက်" ဟုအဆိုပါကမ်းလွန် Trust လိုက်လျောဖို့ငြင်းဆန်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုနှင့်အတူနိုင်ငံတကာဘဏ်အကောင့်အာဏာအရှိဆုံးပေါင်းစပ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းကမ်းလွန်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအခွင့်အလမ်းအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကတစ်ဦးအဖြစ်အားလုံးအဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်မှုနှင့်လုပ်ရပ်များအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ် အရည်အချင်းပြည့်မီ introducer ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးဘဏ်များရန်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုတည်ထောင်ဘို့အင်အားအကောင်းဆုံးအငြင်းပွားမှုများတစ်ခုမှာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကောင်းစွာ-rounded အစုစုကိုမကြာခဏတော့ရှယ်ယာ, ငွေချေးစာချုပ်များ, အိမ်ခြံမြေ, အဖိုးတန်သတ္တုနှင့်တူသောပါဝင်ပါသည်။ အဲဒီပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးတိုးရုံကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းထဲတွင်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံချပြီးထက်ပိုဆိုလိုတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစသင်တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်နှင့်အတူအောင်မြင်ရန်နိုငျသောပထဝီအနေအထားနှင့်ပထဝီနိုင်ငံရေးအမျိုးမျိုး, ကိုဆိုလိုသည်။ စိတျထဲမှာလက်ရှိအမေရိကန်အမျိုးသားကြွေးမြီ Keep ဒီအရေးအသား၏အဖြစ် $ 22 ထရီလီယံ topping, All-အချိန်တွင်မြင့်မားသည်။ သူများသည်နံပါတ်များကိုပင်အမေရိကန်အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို။ ဗြိတိန်နိုင်ငံကြွေးမြီအတွက်£ 2.2 ထရီလီယံ ($ 8 ထရီလီယံ) ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမဏီအကြွေး€ 4.5 ထရီလီယံ ($5ထရီလီယံ) ကျော်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်ရန်ပုံငွေများရှိခြင်း သာ. ကြီးမြတ်ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေးနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ပေးမယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကြွေးမြီ၏ယုန်ပေါက်ချစို့လာတယ်ဆိုရင်, သင်ကသူတို့ကိုသင်သည်တလျှောက်ယူချင်ကြပါဘူး။ ဘဏ္ဍာရေးပြိုလဲပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါသင်ဘေးကင်းဒေသများတွင်ရန်ပုံငွေများရှိပါကဒါ, သင်သည်သင်၏အိမ်နီးချင်းများထက်အများကြီးပိုကောင်းပုံသဏ္ဍာန်အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အမေရိကန်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလွန်အကျွံအကြွေး Standard & Poor ရဲ့အားဖြင့်လျှော့ချခဲ့သည်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျ 16 S & P AAA rated နိုင်ငံများတွင်သာရှိပါသည်။ အမေရိကန်သူတို့ထဲကတဦးတည်းမဟုတ်ဘူး။
အများဆုံးအမေရိကန်အကောင့်မတူဘဲတစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်သင်သည်သင်၏ရန်ပုံငွေများကျင်းပရန်ရသောကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးအကြားရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အတော်များများကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေငွေကြေးအမျိုးမျိုးအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုကျင်းပရန်ကြိုက်တတ်တဲ့။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့ကဒေါ်လာစျေးရဲ့ဝယ်ယူမှုပါဝါကျဆင်းမှုလျှင်လျော့နည်းထိခိုက်နစ်နာဖြစ်ကြသည်။
များစွာသောအားသာချက်များအမျိုးမျိုးသောငွေကြေးအကြားရွေးချယ်ရာတွင်ဖို့ရှိပါတယ်စဉ်သို့သော်, အားနည်းချက်များလည်းရှိပါသည်။ သငျသညျရရှိခဲ့သည်အကျိုးစီးပွားအပေါ်နိုင်ငံခြားအခွန်မရှိစေရန်တက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါပြီသူ၏ငွေကြေးအတွက်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေ့ကြုံခဲ့လျှင်, ငွေကြေးတန်ဖိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ စစ်အစိုးရကတိုင်းပြည်အတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်ဘဏ်များ၏နောက်ဆက်တွဲပြည်သူပိုင်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအမြဲရှိပါသည်။
အဆုံးစွန်သောနိုင်ငံအများစုအတွက်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအများအပြားကအမေရိကန်များ၏ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းစိတ်ကိုထားပါ။ ဒီတော့သူခိုးတွေသို့မဟုတ်အလားတူဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုများကြုံနေရ၏လေးသာမှုအနည်းငယ်တိုးပွားစေပါသည်။ ထို့ပြင်များစွာသောနိုင်ငံများတွင်အမေရိကန်ကဲ့သို့တူညီသောစားသုံးသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရှေ့တော်၌လူမြိုး၏စားသုံးသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ ပိုကောင်းသေး, ကမ်းလွန်အကောင့်ဖွင့်လှစ်အပေါ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းကိုနိုင်ငံတကာဘဏ်အကောင့်လိုအပ်သူတွေကိုကူညီအပေါ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတငွေကြေးပြောင်းခြင်းကိုမကြာခဏလဲလှယ်အခကြေးငွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလဲလှယ်အခကြေးငွေငွေကြေးပြောင်းလဲခြင်းအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အချက်နေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာအဖြစ် Forex နေ့ကကုန်သွယ်လေ့ကျင့်သူကိုလူအများစုများသောအားဖြင့်ဆုံးရှုံးဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်သည့်အခါကအလွန်အရေးကြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီနဲ့ရှိသည်ဖို့အဘယ်ကြောင့်ဒါကြောင့်အထက်ပါအကြောင်းပြချက်များပြင်းပြင်းထန်ထန်ထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်များကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကုသသောဘဏ်များကိုငါသိ၏။ ကျနော်တို့ဘဏ်ကိုသင့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူကိုလူတို့အဘို့အကောင့်ဖွင့်လတံ့သောသင်တို့သိကြ၏။ ထိုမှတပါး, ဘဏ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်တစ်ဦးအားကြီးသောအလိုရှိ၏။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအကြံပြုမတိုင်မီဒီတော့ကျနော်တို့မှန်မှန်ဘဏ်တွေရဲ့ solvency သုတေသန။ ဒီကြားမှမဟုတ်ဘဲအားလုံးဘဏ်များဘဏ္ဍာရေး stallwards အဖြစ်တက်အဆုံးသတ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးရန်သင်တို့အဘို့အထက်ဂဏန်းရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်, သင်သည်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပုံစံဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏ကမ်းလွန်တဦးတည်းရန်သင့်အားပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်ကနေဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်းဖြင့်သင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ရန်ပုံငွေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာတစ်ခုကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်သည့်အခါဤအအပြောင်းအရွှေ့မှတဦးတည်းအသေးထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်, သောအဖိုးအခအကြောင်းအရာများကို။ ပြည်တွင်းဘဏ်များအကြားကိုဖန်ဆင်းဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်း, နိုင်ငံတကာဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းမတူဘဲတခါတရံရန်ပုံငွေများကိုစေလွှတ်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိထားပါသည်ရှိမရှိဖောက်သည်မှတရားစွဲဆိုအခကြေးငွေပါဝင်သည်။ မရှိစံကြေးဖြစ်တယ်, ဒါအလားအလာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း client များသည်အကောင်းဆုံးအပေးအယူကမ်းလှမ်းအဖွဲ့အစည်းများရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ အထူးသ, ကမ်းလွန်ဘဏ်များပုံမှန်အားစစ်ဆေးမှုများ (စစ်ဆေးမှုများ) အကျိုးရှိစွာအသုံးချကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းဖြစ်ကြသည်။
သင့်ရဲ့ကမ်းလွန်အကောင့်များမှရန်ပုံငွေဆုတ်ခွာယေဘုယျအားဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ဘဏ် ATM စက်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသငျ့တယျလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလမ်း, သင့်ပိုက်ဆံကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလွယ်တကူဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့အဲဒီအရောင်းအကိုလည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကြေးမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ခဲတစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်စစ်ဆေးမှုများပူဇော်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအများအပြား client များအတွက်ရန်ပုံငွေများဆုတ်ခွာတစ်ဦးသင့်လျော်သောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်တစ်ခု client ကိုမှစစ်ဆေးမှုများထုတ်ဝေသောအခါ, လျှို့ဝှက်မှေးမှိန်။ ဒါဟာပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံခြားဘဏ်အပေါ်ရေးဆွဲတဲ့စစ်ဆေးမှုများလက်ငင်းငွေချေရန်လည်းခက်ခဲသည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆေးမှုများ cashing ရှည်စောင့်ဆိုင်းကာလမလိုအပ်ပေမည်။
A ကောင်းဆုံးကအခြားရွေးချယ်စရာအသီးသီးတစ်ဦးပြည်တွင်းနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်ထဲမှာနှစ်ခုအကောင့်အသုံးပြုနေသည်။ ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းမှတဆင့်, သင်သည်သင်၏ပြည်တွင်းဘဏ်ရန်သင့်ကမ်းလွန်အကောင့်မှငွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေရယူပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဆဲပြည်တွင်းဘဏ်ရဲ့အဆင်ပြေစေရန်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးနေချိန်မှာသင့်ရဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကကမ်းလှမ်း privacy ကိုပျော်မွေ့။
ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပေါ်တွင်သင်၏သုတေသနဖျော်ဖြေတဲ့အခါ, ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဒေသခံအခွန်ယူပါ။ အခြားသူများကိုလုပ်ပေးနေချိန်မှာကျနော်တို့အသုံးချကြောင်းအများစုကကမ်းလွန်ဘဏ်များ, နိုင်ငံခြားအကောင့်အသစ်များ၏အပေါ်ဒေသခံအခွန်စည်းကြပ်ပါဘူး။ သငျသညျ US မှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအကောင့်တစ်ခုကိုကိုင်ထားမယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိပါတယ်ဒေါ်လာ။ တစ်စုံတစ်ဦးကဆွစ်ဖရန့်အတွက်အကောင့်တစ်ခုရရှိထားသူလျှင်, အကောင့်ပိုင်ရှင်ရှိသူများအမြတ်အစွန်းအပေါ်ဆွစ်ဇာလန်အခွန်အခများပေးဆောင်။
ဒီတော့ကြောင်းသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်, သင်မူကားဘဏ်လုပ်ငန်းမှာထားတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မသာအခွန်ပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်ဆိုလိုနိုင်ဘူး။ သက်ရောက်မှုများကိုများသောအားဖြင့်ကြားနေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်, သင်, သင့်ပြည်တွင်းအခွန်ဥပဒေကြမ်း၏ချွတ်နိုင်ငံခြားအခွန်နုတ်မရ။
နိုင်ငံတကာဘဏ်အကောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်လူမြိုးတစျမြိုးတစျဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သောကြောင့်ဥစ္စာသည်အဘယ်အရာကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်ဥပဒေအရလိုအပ်သော Know-သင့်ရဲ့-ဖောက်သည်စည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏လိုင်စင်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဤသည်ကိုသင်အရာကိုပြုသင့်သည်စာရွက်စာတမ်းများဘဏ်တောင်းဆိုမှုများကိုပေးရမညျကိုဆိုလိုသည်။
သင်တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ချင်ပါသလား? သို့ဆိုလျှင်အထက်ပါဖုန်းနံပါတ်များ၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ပါ။ သငျသညျ, အပြင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များများအတွက်တစ်နေ့လျှင် 24 နာရီဤစာမျက်နှာတွင်ပုံစံဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
> ကျအခနျး4မှ